प्रदीप गिरीको लकडाउन डायरी : मृत्यु सत्य हो, भय किन ? | Ratopati
प्रदीप गिरीको लकडाउन डायरी : मृत्यु सत्य हो, भय किन ?
‘प्रेम र जीवन बाँच्ने कलामाथि हजारौँ किताब आएका छन् तर मृत्युमाथि किताबै छैन’
personलोकेन्द्र भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeचैत १९, २०७६ chat_bubble_outline3
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई लिएर विश्वभर उत्पन्न भएको त्रास समाजवादी चिन्तक एवम् विचारकका रूपमा परिचित काँग्रेसका नेता प्रदीप गिरीलाई अस्वाभाविक लागेको छ । यसो हुनुका कारणमा उनी ‘जीवनको सत्य अङ्ग मृत्युप्रति विचार–विमर्श नहुनु’ ठान्छन् । रातोपाटीसँग नेता गिरीले कोरोनाबारे विश्वभर देखिएको भय र आफ्नो ‘लकडाउन डायरी’ यसरी सुनाए :
लकडाउन हुन एक दिनअघि नै म मरो गाउँ आइपुगेको थिएँ । यतिबेलामा आफ्ना गाउँमा बसिरहेको छु । यहाँ यसो केही पुलिस छिरेर यसो गर, त्यसो गर भनेर हप्कीदप्की गर्ने गरेको सुनेको छु । म बस्ने ठाउँमा त पुलिस आएको पनि छैन ।
ग्रामीण जीवनमा ५० वर्षअघि एक प्रकारको सरलता थियो । अहिले म त्यही अनुभव गरिरहेको छु । साथै, वर्षौंदेखि यहाँ थन्क्याउने गरेका किताबहरु थिए । लामो अन्तरालपछि ती किताब हेर्न समय पाएको छु । अहिले ती किताबहरु हेरिरहेको छु ।
अहिले म नयाँ किताब कम, पुराना किताब बढी पढ्ने गरेको छु । माओ चतुङको ‘रेडबुक’कै कपी गरेर आफ्नो देशको राजनीतिका लागि पोलपोटले ‘रेडबुक’ बनाएका थिए । अहिले त्यही किताब पढेर मन मनै हाँस्दैछु ।
यस्तै विश्वको साहित्य जगत वा अङ्ग्रेजी साहित्यमा उत्कट र दारुण प्रेमकथा भएको उपन्यास ‘वदरिङ हाइट’ बाहेक दुनियाँमा अर्को लिखिएको छैन । मैले तेस्रो पटक त्यो किताब पढिरहेको छु । अर्को, गान्धीजीले कल्पना गरेको स्वराज बारेमा एउटा आलोचनात्मक किताब लेखिएको छ । त्यो किताब पनि पढ्दै छु ।
आज (सोमबार) एक जना क्रिस्चियन मित्र आइपुगे । ‘तिमी किन क्रिस्चियन भयौ ?’ भनेर मैले उनलाई बाइबलको कुरा सोधेँ । उनले मलाई बाइबलको कथा सुनाउन थाले । उनले सुनाएको कथामा तथ्यगत त्रुटि देखेर मैले उनलाई सम्झाउँदै रामायणको एउटाप्रति पढ्न दिएँ । यतिखेर मेरो अगाडि बाइबललगायत चारवटा किताब छन् । आरामले पढिरहेको छु ।
लकडाउनमा मेरो नयाँ दिनचर्या केही छैन । हाउस (संसद) जाने वा बैठक जानेबाहेक मेरो दिनचर्या कहिले पनि केही नयाँ हुँदैन । मेरो आइप्याडमा युट्युबबाट पहिले नै डाउनलोड गरी राखिएका साङ्गीतिक कार्यक्रमहरु हुन्छन् । जहिले पनि जहाँ पनि बिहान उठ्नेवित्तिकै चालू गरिदिन्छु । यस्ता कुरा सुन्ने मेरो विचित्रको बानी पनि छ । अनि कालो चिया लिन्छु । सङ्क्षिप्तमा भन्दा मेरो दिनचर्या काठमाडौँमा जे थियो, यहाँ पनि त्यही छ ।
प्रत्येक सङ्कटमा अवसर हुन्छ भनेर मैले मात्र भनेको होइन । बिल गेट्सलगायतले पनि यसबारेमा लगातार लेखिरहेका छन् । कति मान्छेले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा बढो मधुर पाराले कोरोनाका फाइदाहरु भनेर लेखिरहेका छन् । ती कुराहरु मेरा अगाडि पनि छन् । ‘कोरोना भाइरसले पहिलो पटक मानिसलाई परिवार भनेको काम लाग्ने इकाइ रहेछ भन्ने सिकायो’, भन्ने खालका पनि लेखेका छन् ।
काठमाडौँमा भए भेटघाटमा नियन्त्रण गर्नुपथ्र्यो होला । गाउँको घरमा बसेकाले त्यो पनि नियन्त्रण गर्नुपरेको छैन । मान्छे आफै डराएर टाढिएका छन् । यसका लागि तपाईंहरुलाई, सञ्चार जगतलाई र सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ला ।
जहाँसम्म गाउँको सचेतनाको कुरा छ । चेतनाको त म जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ तर भय भने भयङ्कर छ । कोरोनाबाट जोगिन दुई–दुई घण्टामा हात धुनु र नजिक नबस्नु भनेको छ । त्यो खासै दृष्टिगोचर भइरहेको छैन । तर भयले सचेतना क्षतिपूर्ति गरिराखेको छ । यो राम्रो पनि हो, राम्रो पनि होइन । भयले गरेको काम राम्रो हुँदैन । तर हामीले कुनै सङ्कट आउँदा त्यसलाई अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । यो कुरा मैले केही समयअघि संसदमा पनि बोलेको थिएँ । त्यसको दुईवटा पक्ष छ । त्यतिबेला यति ज्यादा तर्सिने र तर्साउने काम नगर्नुहोस् भनेको थिएँ ।
‘यस्तो रोग पनि छैन, जसको औषधी छैन...’ भनेर कुरा सुरु गरेको थिएँ । यहाँ सचेतनाभन्दा पनि बढी तर्साउने काम भइराखेको छ । यो नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि भइराखेको छ, सर्वत्र पनि भइरहेको छ । अर्को कुरा प्रत्येक सङ्कटहरुमा अवसर हुन्छ ।
यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ । प्रत्येक सङ्कटमा अवसर हुन्छ भनेर मैले मात्र भनेको होइन । बिल गेट्सलगायतले पनि यसबारेमा लगातार लेखिरहेका छन् । कति मान्छेले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा बढो मधुर पाराले कोरोनाका फाइदाहरु भनेर लेखिरहेका छन् । ती कुराहरु मेरा अगाडि पनि छन् । ‘कोरोना भाइरसले पहिलो पटक मानिसलाई परिवार भनेको काम लाग्ने इकाइ रहेछ भन्ने सिकायो’, भन्ने खालका पनि लेखेका छन् ।
प्रत्येक सङ्कटले मनुष्यलाई चेतना त दिएको छ तर यो सङ्कटको आधारभूत कारण होः मानिसको ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुख सयल मै लिऊँ, मोज मै गरुँ’ भन्ने भन्ने प्रवृत्ति । त्यही हिसाबले हामीले प्रकृतिमाथि दोहन, शोषण, लुट, डकैती र पर्यावरणको विनाश गरिहेका छौँ ।
मृत्यु के आफैंमा त्यति त्रासद् सत्य हो त ? अहिले दुनियाँमा जुन सभ्यता चलिरहेको छ, यसलाई ठ्याक्कै के भन्ने थाहा छैन । तर गान्धीजीले यसलाई पशु सभ्यता भन्थे । म गान्धीजीको शब्द दोहोर्‍याउन चाहन्न । दुनियामा चलिरहको पशु र पाशविक सभ्यताले जीवनप्रति एउटा स्वस्थ दृष्टिकोण नै निर्माण गर्न सकेको छैन । मृत्यु पनि जीवनको अङ्ग हो भन्ने यसले बिर्सिन चाहन्छ ।
त्यसतर्फ आवश्यक सचेतना नै छैन । अर्को कुरा मृत्यु जीवनको सत्य कुरा होइन र ? तर मनुष्यका लागि मृत्युलाई किन यत्रो भयङ्कर र भयावह बनाएको ?
डाक्टरी पेशामा एलोपेथी भन्ने हाँगा छ विश्वमा चलिरहेको । त्यसको काम भनेको मानिसलाई मर्नबाट रोक्ने हो । अर्कोतिर आयुर्वेदले बाँच्न पनि सिकाउनुपर्छ, मर्न पनि सिकाउनुपर्छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो । कोरोनाले सिर्जना गरेको भयावहताका बारे कुरा गर्दा मुलुकको हालत दयनीय रूपमा हास्यास्पद र हास्यास्पद रूपमा दयनीय छ ।
हाम्रो मुलुकको कुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने एकातिर छ । अर्कोतिर विश्व स्तरका कुरा गर्दा उन्नत, विकसित र सभ्य भनिएका देशहरुमा पनि मृत्युको त्रास देखियो । मृत्युको त्रासलाई हरेकका विचार र पद्धतिले साथ दिरहेका छन् ।
मृत्यु के आफैंमा त्यति त्रासद् सत्य हो त ? अहिले दुनियाँमा जुन सभ्यता चलिरहेको छ, यसलाई ठ्याक्कै के भन्ने थाहा छैन । तर गान्धीजीले यसलाई पशु सभ्यता भन्थे । म गान्धीजीको शब्द दोहोर्‍याउन चाहन्न । दुनियामा चलिरहको पशु र पाशविक सभ्यताले जीवनप्रति एउटा स्वस्थ दृष्टिकोण नै निर्माण गर्न सकेको छैन । मृत्यु पनि जीवनको अङ्ग हो भन्ने यसले बिर्सिन चाहन्छ । जीवन उज्यालो र अँध्यारोले भरिएको छ । सुग्घर र फोहोरीले भरिएको छ । अहिले सबैको पेटमा दिसा छ । तर मान्छेले त्यो शब्द पनि प्रयोग गर्न चाहन्न भनेर सभ्यताका आलोचकहरुले लेखेका छन् ।
पहिले हामी पाइखाना भन्थ्यौँ । त्यसपछि शौचालय भन्यौँ, ट्वाइलेट भन्यौँ, अहिले हामी ‘रेस्टरूम’ भन्दैछौँ ।
एउटा लेखकले ‘हामी जीवनका अप्रिय तथ्यहरुलाई इन्कार गर्दै जान्छौँ’ भनेर यसरी नाम बदलिएको विषयमा लेखेका छन् । यस्तै, मान्छे मृत्युबारे छलफल नै गर्न चाहन्न । मैले ५० वर्षअघि प्रेममाथि कति किताब छन् भनेर खोजें । त्यतिबेला प्रेममाथि कम किताब थिए । अहिले हेर्दा ‘प्रेम’ र ‘तपाईं कसरी खुसी हुन सक्नु हुन्छ ?’ भन्नेबारे एकदम बढी किताब छन् ।
मैले पढ्न लेख्न थालेको ५० वर्ष भयो । प्रेम र जीवन बाँच्ने कलामाथि हजारौँ किताब आएका छन् तर मृत्युमाथि किताबै छैन । मृत्यु के विचार विमर्श नगर्ने विषय हो ? वास्तवमा, हाम्राबीच मृत्युप्रति कुनै दृष्टिकोण नभएकाले नै आज हामी यति भयभीत छौँ ।
April 1, 2020, 7:34 p.m. Sanjeeb
Pradeep Sir! Your thought about death and the human fear surrounding it could beabit more philosophical. It is the most difficult thing forahumanbeing to accept his/her death regardless of his philosophical study. But you have madeavalid point that allopathy is only one of many branches (ways or methods) of treating illness and ailments in human beings! I believe that if persons of your stature start advocating the effectiveness of Ayurveda and herbal medicines , we will be able to find the cure to ailments and conditions like COVID-19. IAnd we can makeahuge difference in the world by harnessing these Himalayan herbs. https://rajdhanidaily.com/id/8514/#
April 1, 2020, 5:21 p.m. Basudev Parajuli
पढेँ तर पनि शिर्षक संग पुरै सहमति रहेन। मृत्यु सत्य हो तर मृत्युको भय मानव मात्र नभई हर प्राणीमा रहन्छ। मृत्यु शारिरीक र सांसारिक अन्य हो त लेखमा जस्तो सहज स्वीकार कसरी हुन्छ?
April 1, 2020, 11:34 a.m. Moti ram itani
Wow, saraii ramro bichar Padhna saraii ramilo lagyo